Madaxweynaha Somaliland oo Dalab Codsi ah u Diray Maxkamadd Dastuuriga ah Inay Fasilaan Kala qaadista Labada Doorasho – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa maanta soo saaray degreeto uu dalab ugu gudbinaayo maxkamadda sare ee Somaliland oo uu kaga dalbanaayo inay fasilaan go’aankii uu ku kala qaaday doorashadda madaxtooyadda iyo wakiiladda.
Halkan ka akhriso digreetadda madaxweynaha Somaliland uu ku saxeexan yahay afhayeenka madaxtooyadda Somaliland Md. Xuseen Aadan Cigge (Dayr), ayaa u dhignayd sidan:
“Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane, Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu Maanta u gudbiyey qoraal Codsi dib-u-eegida Qaraarkii Fasiraada ee Maxkamadda Dastuuriga ah. Waxaanu u qorsaa sidan:-
Ku: Guddoomiyaha Maxkamadda Dastuuriga ah Hargeysa
Og: Dalladda Ururrada Bulshada Rayidka ah (Sonsaf) Hargeysa
Og: Akaademiga Nabadda iyo Horumarinta (APD) Hargeysa
Og: Guddoomiyaha Xisbiga UCID Hargeisa
Og: Guddoomiyaha Xisbiga WADDANI Hargeisa
Og: Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE Hargeisa
Og: Guddida Doorashooyinka Qaranka Hargeisa
Og: Shir-guddoonka Golaha Wakiillada Hargeysa
Og: Shir-guddoonka Golaha Guurtida Hargeisa
Ujeeddo: Codsi dib-u-eegid Qaraarkii Fasiraada ee Maxkamadda Dastuuriga ah
in dib-u-eegis iyo dib-u-qaybin lagu sameeyo Saami-qaybsiga Kuraasta Golaha Wakiillada Jamhuuriyadda Somaliland ee Gobollada, iyadoo tixgelin wayn la siinayo deegaanada Awdal, Sool iyo Sanaag Bari.
in qiimayn iyo tixgelin lagu sameeyo saamiga kuraasta Golaha Wakiillada ay ku yeelan karaan Dumarka iyo Dadka laga tirada badan yahay.
Haddaba, ka dib markii aan soo saaray go’aamada kor ku xusan, waxaan u gudbiyey Golaha Wakiillada Jamhuuriyadda Somaliland si uu uga guto waajibkiisa dastuuriga ah, maadaama ay iyagu hore ugu codeeyeen in la isku lamaaneeyo labada doorasho ee Wakiillada iyo Madaxtooyada, isla markaana go’aan ku soo saareen.
Mudane Guddoomiye, waxaan si xushmad leh kuugu war-gelinayaa in Golaha Wakiilladu iyaga oo tixgelinaya sababaha aan u cuskaday dartood ay cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen 17/09/2016, go’aan Lr. GW/KF-31/708/2016 kala qaadista Doorashada Golaha Wakiillada iyo Doorashada Madaxtooyada, iyadoo Doorashada Golaha Wakiillada dib loo dhigayo, Doorashada Madaxtooyadana wakhtigeeda lagu qaban doono.
Sidaa darteed, waxaan Maxkamadda Dastuuriga ah ka codsanayaa in ay dib-u-eegis ku samayso Qaraarkii Fasiraadda ahaa ee Maxkamadda Dastuuriga ah ee summaddiisu tahay MS/DD/02/2015 ee 18/08/2015, iyada oo ka duulaysa, isla markaana tixgelinaysa sababaha kor ku xusan.
Af-hayeenka Madaxtooyada JSL.”